Dzivirira kufutisa mumhuka dzedu - Tsvaga kuti sei! | Bezzia
Maitiro ekudzivirira kufutisa mumhuka dzedu dzemhuka
Susana godoy | 06/10/2021 16:00 | Mascotas
Zvinotaridza kuti tese tine hanya nekuva nemapaundi mashoma ekuwedzera. Naizvozvo, tinoziva zvekuita uye zvatisingafanire kuedza kuzvidzivirira. Zvakanaka, zvimwe chete zvinoitika nezvipfuwo zvedu, ndiani isu tinofanirwa kudzivirira kufutisa kunotinetsa zvakanyanya uye kunogona kutungamira kumatambudziko ehutano zvakakomba.
Kana dziri mhuka, nekuda kwemamiriro akati wandei, ivo vanogona kuwana huremu kunyangwe isu tiri kudzora chikafu chavo. Nekudaro, isu tinofanirwa kuve nezvose zvakajeka kuti tikwanise kuita nenzira inodiwa. Iwe unoda here kuziva kuti ungazviita sei? Isu tichakuudza!
1 Ndezvipi zvinhu zvinokonzeresa kufutisa muzvipfuyo
1.1 Zera, chimwe chezvakanyanya kukosha
1.2 Sedentary zvakare yevaridzi
1.4 Kusava nechikafu chakaringana
2 Nzira yekudzivirira kufutisa mumhuka dzedu
2.1 Nguva dzose ongorora kudya kwako
2.2 Ruramisa nhanho yechiitiko chemuviri
2.3 Nguva dzose bvunza vet
Ndezvipi zvinhu zvinokonzeresa kufutisa muzvipfuyo
Zera, chimwe chezvakanyanya kukosha
Ramba uchifunga kuti yakasarudzika pateni haigare ichiteerwa, asi zera ndicho chimwe chezvinhu zvinonyanya kukurudzira kana uchitaura nezve kufutisa mumhuka dzinovaraidza. Nekuti pamusoro pemakore vanofamba zvishomaUye zvakare, panogara paine dzimwe nguva kuwedzerwa muchimiro chezvirwere izvo zvisingavatenderi iwo iwo iwo iwo wega rusununguko rwekufamba.
Sedentary zvakare yevaridzi
Sezvatakataura zera mumhuka, isuwo tinofanira kuita zvakafanana nevaridzi. Nekuti matambudziko ekare kana akawanda, pamwe mhuka dzinovaraidza dzinoenda pasi kumugwagwa zvakanyanya. Izvo zvinoguma ne mamwe maitiro ekugara. Iwe unoshandura kune hupenyu hwakadzikama uye sezvo pasina huni yakawanda mairi, iwe unowanzo wedzera huremu.
Mhuka dzakavezwa ivo zvakare vane yakakwira muzana kuti vawedzere huremu. Izvi zvinokonzerwa nekuchinja kwavo mumetabolism uye nekudaro ivo vanofanirwa kudzora zvakatowanda zvese zvavanodya.
Kusava nechikafu chakaringana
Hazvishamise kuti kana isu tikasatevera imwe kudya kwakaringana, makirosi anotanga kusimuka asina kukumbira mvumo. Naizvozvo, zvakakosha zvakanyanya kuti titonge zvatinovafudza. Chokwadi kutanga nhanho yakadai, isu tichawana mibairo mikuru.
Nzira yekudzivirira kufutisa mumhuka dzedu
Chokwadi kuziva zvinhu zvinogona kukanganisa mhuka dzinovaraidza, isu tatova nezano rakakura renhanho dzese dzatinofanira kutora kuitira kuti zvirege kuitika.
Nguva dzose ongorora kudya kwako
Ndiyo kiyi huru yekugona kutaura nezve a hutano hwakanaka. Naizvozvo, kana tine kukahadzika, zvakanaka kuti utaure nachiremba wemhuka wako waunovimba naye, nekuti anozogona kukutungamira kana uchimupa chikafu chimwe kana chimwe, pamwe nekugona kugadzirisa huwandu hwechikafu, chinovawo chakanyanya zvakakosha. Sezvo zvichizotarisa mujaho, zera uye mamwe akawanda mamiriro anofanirwa kupihwa kuitira kumisikidza ichi chiyero.
Ruramisa nhanho yechiitiko chemuviri
Nekuti haisi imbwa dzese dzinoshanda zvakanyanya kana dzinoda kushandisa macalorie mazhinji pazuva. Naizvozvo, iyi poindi inofanirawo kugadziriswa nenzira kwayo. Kugadziridza zvese nenzira chaiyo, ichave iri yakanyanya kunaka nzira yekutora nhanho inoda imbwa dzedu dzine mvere dzinoda. Nekuti hatife takavamanikidza kuita mamwe mabasa izvo zvinodikanwa kwavari.
Nguva dzose bvunza vet
Nguva zhinji tinofunga kuti tiri kuita zvakanaka uye pamwe hatisi. Naizvozvo, hapana chakafanana nekubvunza chiremba wemhuka. Nekuti iye chete ndiye anogona kutipa yakanakisa nhungamiro yekutevera. Sezvo sekuziva kwako iwe, imbwa dzakafutisa dzinogona kuva nehupenyu hupfupi. Saka seta nhungamiro yezvokudya, zvinovaka muviri uye simba izvo zvakafanira kwavari. Chokwadi nematanho akakodzera uye nekutenda mukudzivirira kufutisa, tinogona kunakidzwa nezvipfuwo zvedu kwenguva yakareba kupfuura zvatinofunga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Mascotas » Maitiro ekudzivirira kufutisa mumhuka dzedu dzemhuka
Tsvaga matsutso echando echando ePurificación García
Cucumber kumeso masiki iwe unofanirwa kuedza